Ndeipi mikana yakakwana yekuwana backlinks kuwebsite yako?
Sekutsvaga injini yekushandura kunoshandura kwenguva yakareba, zvinokonzera kuchinja munzira dze- mbiri ne-off-page optimization. Kutsvaga injini yekuvandudza kuchaenda kuve yakaoma zvikuru mune ramangwana nekuda kwekukwikwidzana kwekukwikwidzana mune imwe digital marketing sphere. Pamwe pamwe nekuchinja mukutsvaga mashandisirwo emagariro, mafambiro evashandisi vekutsvaga achange achida kuchinjawo, zvichiita kuti digiti yemu digital ive yakakwikwidzana, kunyanya kana ine chokuita nekubatanidza chizvarwa - angebotsschreiben muster vorlagen. Vese webmasters vanonzwisisa kukosha kwemashure endangariro kune chero nzvimbo yewebhu uye vanoedza kuedza kuvawana. Kunyange zvazvo uine hukuru hwepamusoro, zvinoenderana nekunze kwehutano kunzvimbo yako ndeye CHINOFANIRA kuti bhizimisi rako rionekwe kuvandudzwa; basa iri nyore kutaura pane kuita. Muchikamu chino, tichakurukura dzimwe nzira dzinokosha dzekushandura maitiro ekuwana zvikwereti zvakakosha kubva kune-PR nzvimbo nekuvandudza nzvimbo yako pane peji rekutsvaga.
Nzira yekuwana sei backlinks kunzvimbo yako?
Chengetedza mazita ako
Ndiyo imwe yenzira dzakakosha uye dzinoshandiswa pakugadzira mazano iwe unogona kushandisa kana mararamiro ako ane mukurumbira wepamusoro mune niche yako kana kuti munguva ichangopfuura akaitisa rebranding. Izvi zvisinganzwisisiki kuvaka chibvumirano zvinokubatsira kuti uwane huwandu hwehutano, uye chii chinonyanya kukosha, zvinoenderana nekunze kwekunyoresa kune site yako. Chinhu chose chaunoda ndechokuti uone unlinked mentions of brand yako uye bvunza vanyori vezvirevo izvi kuti uise chibatanisi kune site yako. Iwe unogona kuita nyore nzira yekutsvaga zvinyorwa zvekushandisa kwako kushandisa mashandisi akadai seSemalt Website Analyzer, Google Search, Google Alerts, nezvimwe.Kuti uzive apo chero zita rako rekurumbira rave rataurwa, unoda kuisa email kana browser browser.
Ipa bhizinesi bhizinesi rako nehupupuriro mukutsinhana kwekubatanidza
Imwe nzira inobatsira iwe unogona kuvandudza mararamiro ako uye kuwedzera nzvimbo yako paGoogle SERP ndekupa zvipupuriro kune dzimwe nzvimbo dzekutsinhanisa nekubatana kwavo kune nzvimbo yako. Iyi michina yekuvaka inobatanidza ichakubatsira iwe kuisa dzakawanda zvekunze kwekambani kune makambani anozivikanwa uye isa zita rako pamapeji avo emumba kana mapeji eupupuriro. Kupa zvipupuriro kune mawebsite zvinowanikwa mumisika yako yekutengesa zvingangodaro zvinokonzera kushamwaridzana kunzvimbo yako.
Itaurwa pamusoro pekukomberedza zvigadzirwa
Chigadzirisa ruvara rwemashoko ndicho chinhu chakakosha zvikuru chakagadzirwa neva blogger uye vaparidzi vemabhizimisi vanotumira mabhuku avo nguva dzose. Gadzirai vese varimi vanopfuurira kutsvaga zvinyorwa zvakanaka uye zvinobatsira kuisa pane dzavo. Izvo zvinonetsa kuti uite mazano ekubatanidza mukati memisika yako yemusika sezvaunoda kugara uchitsvaga zvinyorwa zvinokosha pawebhu. Uyezve, pane ngozi yokuti vashanyi vemakwikwi ehurumende vangasadzoka. Zvisinei, kana iwe uchigona kuvapa nekutaura uye zvakakosha, mikana iyo inodzoka iri kuwedzera. Kutaurirana nekubatanidza curators kunoshanda zvakafanana nemamwe mapurogiramu ekuparidzira. Chinhu chokutanga chaunoda kuitei ndechokuti uwane ruzivo rwekubatanidza rwekubatanidza vatengesi uye uvatumire maimeri akafanirwa nechinangwa.
Zvivakidzani kune YouTube
. Zvimwe chete niches zvinogona kuwedzera iyo nzira yekuvakira mazano. Izvi zvinosanganisira teknolojia, kutamba, dzidzo, sayenzi, uye varaidzo. Chimwe chikomborero chikuru chekuvaka chibatanidza pachikuva ichi ndechekuti vhigiki vemavhidhiyo vanoda kuwana zvakafanana neBlogger nguva dzose vanoda kufamba kumapeji ake. Iwe unogona kugadzirisa ukama hunobatsira pamwe chete nevhidhiyo blogger kuti uwane ruvara kubva kuYouTube. Nemuenzaniso, unogona kuisa mavhidhiyo mavo kumahofisi ako ebhuku, uye mukutsinhanisa, iwe unogona kubvisa vhidhiyo yavo mubhuku re blog.